Jaamacada Qoraxeey [JQ]oo Dhismaheedu ka Bilaaban Doono Magaalada Qabridahare – Rasaasa News
Jaamacada Qoraxeey [JQ]oo Dhismaheedu ka Bilaaban Doono Magaalada Qabridahare
Jan 16, 2011 ethiopia, horn of africa, Jaamacada Qoraxeey [JQ]oo Dhismaheedu uu ka Bilaaban Doono magaalada Qabridahare, ogaden peace, somalia
Jijiga, Jan 15, 2011 [ras] – Jaamacadii 2aad ee uu yeesho Degaanka Somalida Itobiya oo uu nasiib u helay gabalka Qoraxeey dhismaheeduna uu ka bilaaban doono magaalada Qabridahare xili aan fogayn.
War aanu ka helay gudiga madaxa banaan ee waxbarashada gabalka qoraxeey, ayaa waxay u xaqiijiyeen bogga rasaasa.com in uu wadada ku soo jiro dhismaha Jamacada Qoraxeey [University of Korahae (UK)]. Jaamacada Qoraxeey oo uu qorshaheedu bilowday shan sano ka hore ayey hada u dhamaystiran yihiin warqadihii fasaxa dhismaha iyo waliba dhulkii laga dhisi lahaa Jaamacada.
Jaamacada Qoraxeey ayaa waxay ka kooban tahay dhawr kuliyadood oo lagu baran doono laamaha cilmiga ee kala duwan ee uu aadka ugu baahan yahay degaanka Somalidu.
Jaamacada Qabridahare ayaa waxaa lacagta lagu dhisayo ka qayb qaadanaya dadweynaha u dhashay degaanka Somalida, ee degan dalalka dibada, dawlada degaanka Somalida iyo dawlada federalka.
Magaalada Qabridahare ayaa ah magaaladii ugu horaysay degaanka Somalida ee laga dhiso Iskuul sanadkii 1954, iskuulkaas oo lahaa cunto, jiif iyo lacag guno ah oo la siiyo ardayda dhigata [boarding School]. Waxaa kale oo ay Qabridahare ka mid ahayd 3 magaalo oo ku yaal degaanka Somalida oo ay dawlada Masar ka hirgalisay Maxadyo lagu barto diinta Islamka iyo culuunta kale.
10 sano ka hore waxaa magaalada Qabridahare laga hirgaliyey mashruuca waxbarashada ee Qoraxeey, kaas oo wax badan ka qabtay waxbarashada magaalada Qabridahare, mashruucaas oo sababay in gabalka Qoraxeey uu kaalinta 1aad ka galo wabarashada degaanka Somalida.
Dadaalada ay sameeyeen xubnaha mashruuca waxbarashada ee Qoraxeey, Waa sababta keentay ii uu gabalku hawaysto in uu yeesho Jaamacad daboosha baahida ardayda badan ee dhamaysanaysa dugsiyada sare gabalka si ay u helaan waxabarasho sare oo ka kharash yar mid ay u aaddaan meelaha fog fog.
Jaamacadan cusub ee gabalka Qoraxeey ayaa waxay dabooli doonta baahida waxbarashada sare ee gabalada degaanka Somalida, waxaa kale oo ay Jaamacadani keeni doonta isbadal weyn oo dhinaca horumarka ah oo uu ku talaabsado degaanka Somalidu.
Dawlada dhexe ee Itobiya iyo dawlada degaanka Somalida ayaa waxay wadaan horumar la taaban karo oo dhinacyo badan leh gaar ahaana dhinaca waxbarashada.
OGAYSIIS: Shir Wayne Beesha Reer Amaadin oo ka Dhacaya Magaalada London